यस्तो छ लकडाउन खोल्ने ६ चरणको योजना, जेठ २५ बाट खुकुलो हुने « Pathibhar Online
काठमाडौं- सरकारले साढे २ महिना लामो लकडाउन जेठ २५ गतेबाट खुकुलो बनाउने भएको छ । आर्थिक गतिविधि ठप्प भएको र जनताको दैनिकी कष्टकर बनेको भन्दै आगामी आइतबारबाट लकडाउन खुकुलो बनाउने गरि सरकराले तयारी थालेको हो ।
संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेका क्षेत्रलाई नखोल्ने, अत्याधिक संक्रमित भएको जिल्लामा लकडाउन कायमै राख्ने र कम संक्रमित भएका तथा संक्रमणको जोखिम रहेका क्षेत्रहरु खुकुलो बनाउने गरि छलफल अघि बढेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार क्षेत्र विभाजन गरेर लकडाउन खुकुलो बनाउने कार्ययोजना बनेको छ । उच्चस्तरिय समन्व्य समितिको बैठकले कार्ययोजनालाई अन्तिम रुप दिएसँगै अब बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकले त्यसलाई पारित गर्नेछ ।
यसअघि वैशाख २६ गतेबाट लकडाउन खुकुलो बनाउने भनेर निर्णय भएपनि त्यो कार्यान्व्यन हुन सकेको थिएन् । उद्योग धन्दा खोल्ने भनिए पनि कसरी आवतजावत गर्ने ? मजदुरलाई कसरी सुरक्षित राख्ने ? लगायतका समस्याका कारण उक्त निर्णय कार्यान्व्यनमा समस्या देखा परेको थियो । यसपटक त्यस्ता समस्याको समाधान हुने गरि कार्यायोजना बनाइएको मन्त्री ढकालले बताए ।
सरकारले ६ चरणको योजना बनाएर लकडाउन खोल्ने भएको छ । सरकारद्वारा गठित कोभिड–१९ संकट ब्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) ले विज्ञहरुको राय लिएर ६ चरणको योजना बनाएको हो । १२ साता लामो उक्त रणनीतिक योजनामा १० औं हप्ताको समीक्षापछि लकडाउन पूर्ण रुपमा खुला गर्न सकिने उल्लेख छ ।
सीसीएमसीले बनाएको रणनीति उच्चस्तरीय समन्वय समितिमा पठाउने तयारी भएको छ । समितिले यसलाई पारित गरेपछि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर कार्यान्व्यन गरिने छ ।
६ चरणको कार्ययोजनामा पहिलो चरण अर्थात पहिलो दुई साता कृषि, साना उद्योग, खुद्रा पसल लगायतका साना व्यवसाय आंशिक रुपमा खुला गरिनेछ ।
दोस्रो चरणमा कृषि कार्यलाई पूर्ण रुपमा खुला गर्दै सम्पूर्ण वित्तीय संस्थाहरु आंशिक खुला गरिनेछ । तेस्रो चरणसम्म पत्रपत्रिकाको प्रकाशन बन्द गरेर अनलाइनलाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
चौथों चरणबाट आशिंक रुपमा निजी र केहि सार्वजनिक सवारी साधन चल्न दिने योजना बनाइएको छ । यहि चरणबाट आंशिक खुलिरहेका उद्योग, वित्तीय संस्था र अन्य निकाय पूर्ण रुपमा खोलिने प्रस्ताव गरिएको छ।
पाँचौं चरणमा ठूलो संख्यामा भिडभाड हुने अवस्थाका बाहेक सबै संघसंस्था, बजार र यातायात खोलिने छ । पाचौं चरण अर्थात दशौं हप्तासम्को समिक्षा गछि अवस्था ठिक ढंगले अघि बढे छैठौं चरणमा प्रवेश गर्ने योजना बनाइएको छ। छैटौं चरणबाट सामाजिक दुरि कायम राख्दै, मास्कलाई अनिवार्य गरेर सबैजसो कार्यालय, यातायातका साधन र बजार खुला गरिनेछ ।